Ilaahay Ibraahim iyo Reerkiisii Buu Barakeeyay | Farriinta Kitaabka
Dhashii Ibraahim way barwaaqoobeen. Ilaahay Masar buu Yuusuf ku ilaaliyay
YEHOWAH wuu ogaa Kan uu ugu jeclaa inuu maalin silci doono oona dhiman doono. Sii sheegidda ku qoran Bilowgii 3:15 baa runtaas ka hadashay. Qiimaha weyn ay dhimashada midkaas leedahay Ilaahay sidee buu binuʼaadanka ugu muujin karayay? Kitaabka masal ahaan buu inoo tusay qiimaheeda markuu Ilaahay Ibraahim ka codsaday inuu wiilkiisii Isxaaq uu jeclaa allabbari ugu bixiyo.
Xusuuso inuu Ilaahay Ibraahim u ballanqaaday in Badbaadiyaha oo ah Farcanka ka iman doono wiilkiisa Isxaaq. Ibraahim iimaan weyn buu lahaa. Wuxuu aamminay haddii uu Isxaaq dhinto inuu Ilaahay soo sarakicin doono. Sidaa daraaddeed Ibraahim diyaar buu u ahaa inuu wiilkiisa allabbari ugu bixiyo. Haddaba isla markaas intuunan dilin wiilkiisa malaaʼig xagga Ilaahay ka timid baa ka qabatay. Ilaahay wuu ku ammaanay Ibraahim inuusan ka lexejeclaysan wiilkiisa. Ilaahay ninkan aamminka ah ballamihiisii mar labaad buu ugu celiyay.
Waqtigaas kaddib Isxaaq laba wiil buu dhalay waxaana la oran jiray Ceesaw iyo Yacquub. Ceesaw qof cibaado laʼ buu ahaa laakiinse Yacquub waxyaalaha quduuska ah buu qiimeyn jiray abaalmar buuna ka helay. Ilaahay Yacquub magaciisa Israaʼiil buu ku beddelay. Laba iyo tobankii wiil uu dhalayna madaxyada qabiillada reer binu Israaʼiil bay noqdeen. Laakiinse reerkaas sidee buu quruun weyn u noqday?
Markay wiilashaas ka masayreen walaalkood ka yaraa Yuusuf waxaa bilaabmay dhacdooyin badan. Walaalkooda yar way iibiyeen oo Masar baa addoonnimo loogu kaxeeyay. Laakiinse Ilaahay wuu barakeeyay wiilkaas aamminka ah oo geesiga ahaa. Inkastuu Yuusuf dhibaatooyin badan la kulmay aakhirkii Fircoon baa awood badan siiyay oo u doortay inuu madax Masar ka noqdo. Taasi waqti fiican bay dhacday waayo abaar baa Yacquub ku qasabtay inuu Masar wiilashiisii qaar ka mid ah u soo diro siday cunto uga iibsadaan. Haddaba kaydinta cuntada Yuusuf baa masʼuul ka ahaa! Si qiiro leh bay Yuusuf iyo walaalihiisii iskugu yimaaddeen. Markuuna arkay inay ka toobadkeeneen waxay sameeyeen wuu cafiyay. Wuxuu qorsheeyay inay reerkiisa oo dhan Masar u soo guuraan dhul aad u fiican baana la siiyay. Aad iyo aad bayna u bateen oo u barwaaqoobeen. Yuusuf wuu gartay in Ilaahay arrinta saas ka dhigay si uu ballamihiisa u oofiyo.
Odaygii Yacquub cimrigiisii oo dhan wuxuu ku dhammaystay Masar isagii oo reerkiisii weynaa la jooga. Dhimashadiisii kahor wuxuu sii sheegay Farcanka la ballanqaaday oo ah Badbaadiyaha inuu noqon doono Hoggaamiye awood badan. Wuxuuna yiri inuu ka dhalan doono reerka wiilkiisii Yahuudah. Yuusufna intuunan dhiman wuxuu sii sheegay inuu Ilaahay maalin reerka Yacquub Masar ka saari doono.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay Bilowgii qaybaha 20 ilaa 50; Cibraaniyada 11:17-22.
Muxuu Ilaahay Ibraahim ku yiri samee? Tani maxay binuʼaadanka u muujisay?
Maxaa Yuusuf Masar keenay aakhirkiina maxaa dhacay?
Yacquub dhimashadiisii kahor muxuu sii sheegay?
Wadaag Wadaag Ilaahay Ibraahim iyo Reerkiisii Buu Barakeeyay